«3 EMA + Stochastic»: 5 istiraatiijiyad daqiiqad ah oo loogu talagalay ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
«3 EMA + Stochastic»: 5 istiraatiijiyad daqiiqad ah oo loogu talagalay ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah
Ka fikirida sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ah , bilowguhu waxay ugu horreyn fiiriyaan heshiisyada muddada-gaaban iyadoo ay dhacayaan daqiiqadaha 1-3. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu helo faa'iido dhakhso leh, laakiin ha iloobin "jiiska bilaashka ah ee mousetrap kaliya". Aad ayey uga faa iid badan tahay dulqaadka iyo la shaqeynta xulashooyin dhaadheer oo dhicitaankoodu yahay 5 daqiiqo ama wax ka badan, sida ku xusan istaraatiijiyada "3 EMA + Stochastic".
Mid kasta oo ka mid ah M1-M5. Xaaladdeenna, M1 waa la isticmaalay, laakiin muddada falanqaynta ee sii kordheysa, saxnaanta calaamaddu way sii kordheysaa.
Lammaane kasta oo lacag ah. Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon.
Dhamaan kalfadhiyada ganacsiga Forex.
Ikhtiyaarka khidmadda boqolkiiba:
Aan ka yarayn 70-75%.
Tilmaamayaasha la adeegsaday
Waxaan raacnaa mabda'a aasaasiga ah ee falanqaynta farsamada " xaqiijinta calaamadaha binary ganacsiga waa in lagu fuliyaa by tilmaamayaasha leh algorithms xisaabinta kala duwan." Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba tilmaame:
Seddex jibbaarane (EMA) celcelis ahaan celcelis ahaan soconaya 14,50 iyo 30 . Tilmaamayaasha isbeddelka ee aan ku go'aansano barta furitaanka ikhtiyaarka. Istaraatiijiyadda looma jeedin ganacsiga inta lagu jiro xilliyada guryaha. Waxaan ka ganacsaneynaa oo keliya haddii qiyaasta u dhexeysa ugu yaraan 15-25 dhibcood!
Stochastic - oscillator wuxuu qiimeyn doonaa isku dheelitirka hadda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha: saadaashu waxay ka sarreysaa heerka 80 - dhammaadka kor u kaca (xad dhaafka ah), ka hooseeya 20 - dhammaadka hoos u dhaca (kor loo qaaday).
Kadib rakibida qalabka, daaqada shaqada terminalku waxay umuuqataa sidan:
Calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah :
Ikhtiyaar CALL. Parabolic SAR ka hooseeya qiimaha, AO cagaar iyo kor. Stochastic waxay ka sarreysaa heerarka eber ama aagga la iibsaday.
Dooro door. Parabolic SAR wuu ka sarreeyaa qiimaha, AO waa casaan iyo hoos. Stochastic RSI sidoo kale waxay hoos ugu sii socotaa in la iibiyo.
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha ganacsiga ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah. Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa in aysan ka yarayn 5-7 daqiiqo xitaa haddii ay tahay waqti shaqeed la doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
Talooyin ku saabsan isticmaalka:
Xitaa waqtiga daqiiqadaha, Stochastic marar dhif ah ayey tagtaa aagagga xad-dhaafka ah waxaadna seegi kartaa heshiisyo badan oo wanaagsan. Haddii qiimaha iyo Stochastic ay bilaabaan inay u dhaqaaqaan hal jiho - waad furi kartaa ikhtiyaar!
Ganacsatada khibrada leh ee waqtiga go'an sare waxay furi karaan meherado iyaga oo isticmaalaya oo kaliya 'Stochastic' si ay ula socdaan "garaaca suuqa", laakiin qaabkani wuxuu ku habboon yahay suuqa saamiyada, halkaasoo ay isbeddeladu ka deggan yihiin. Laakiin suuqa firfircoon ee Forex, had iyo jeer waxaa jira khatar dib-u-noqosho deg deg ah xitaa isbeddel muddo-dheer ah, markaa tixgeli xogta qalabka kale ee farsamada iyo calaamadaha ganacsiga nool ;
Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan meheradda ganacsiga binary ee caanka ah !
In kasta oo aad maalintii oo dhan ganacsan karto, natiijooyinka ugu faa'iidada badan ayaa la helay qeybtii labaad ee fadhigii Mareykanka (laga bilaabo 16:00 UTC) iyo dhammaadka kalfadhigii Aasiya (illaa 06:00 UTC);
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu xisaabtamo kaliya ma aha isbeddelka qalabka ganacsiga guud ahaan laakiin sidoo kale qiimaha celceliska kulamada ganacsiga Forex. Tusaale ahaan, lammaanaha leh Euro waa kuwa ugu firfircoon kal-fadhiga Yurub, taas oo macnaheedu yahay in shaxanka uu yahay midka ugu wargelinta badan. Dhinaca Aasiya, mugyadu si aad ah ayey u dhacayaan oo isha binary otomaatig ayaa joojiya shaqada.
Istaraatiijiyadda Intraday «3 EMA + Stochastic» waxay u taagan tahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo ah muxaafid xagjir ah oo loogu talagalay ganacsiga suuqa xasilloon. Halbeegyada qalabka ganacsiga waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa in calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo bilaash ah ay ku jiri doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!
Ganacsi otomaatig ah marka loo eego istiraatiijiyadda «3 EMA + Stochastic» waa suurtagal: dhowr nooc oo ah ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah ah ayaa laga heli karaa shabakadda, laakiin, sida nidaam kasta oo loo yaqaan 'scalping system', waxaa ka wanaagsan in gacan looga ganacsado iyadoo la adeegsanayo qorshahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u hagaajiso nidaamka isbeddelada suuqyada, iyo hantida badan ee istiraatiijiyaddu waxay kuu dammaanad qaadaysaa faa'iido deggan maalin kasta.
Ka bilow ganacsi
Waxa laga heli karaa calaamadaha vfxalert ee ujeeddooyin macluumaad oo keliya sinaba sinaba looma hage tilmaamo wax qabad. Mulkiilaha goobta iyo barnaamijka ma aqbalayo mas'uuliyad kasta oo ku saabsan adeegsiga macluumaadka lagu soo qoro websaydhka iyo barnaamijka vfxAlert, wixii khaladaad ah. Macluumaadka degelkani kama dhigna wax bixin guud.
blog rasmi ah vfxAlert